Wixii Chevrolet Silverado Super Crew - Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd.
Mat-ka Gawaarida Gaarka ah ee 3D
QAABILAASHA SHAQAALAHA SILVERADO
Badeecad tayo sare leh oo ah CHANGZHOU DEAO
Waxay u taagan tahay heerarka sare ee
alaabooyinka derin ee adduunka.
Cusbooneysiin cusub iyo qaabeyn macquul ah
Naqshadeynta qaabdhismeedka gaarka ah ee hoose
waxay kordhisaa qabashada sariirta gaariga
iyo saameynta ka-hortagga taraafikada waa wax iska cad
iyo boodboodku ma saamayn doono wadista.
Waxyaabaha TPE ee ilaalinta deegaanka ayaa si buuxda loo xaqiijin karaa xitaa jawiga heerkulka sareeya.
Waxaa lagu soo saaray heerarka laba-geesoodka ah ee ISO9001 iyo FMVSS302
Xogta gaariga asalka ah, hal nooc halkii gaari, nooca u hogaansanaanta
Dareenka 3D, khadadka guud ee quruxda badan
Naqshadeynta qaabka kanaalka ee horumarsan ayaa ururin kara qadar badan oo dareere ah, ciid,
sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho ciidda iyo biyaha kabahaaga wasakheeya,
ama xitaa ku shub kala badh qasacad Coke jidhka gaadhiga.
Waxyeello kama soo gaadho rakibidda asalka ah.
Wax saameyn ah kuma yeelanayo isticmaalka gaariga asalka ah.
Qaabab qaali ah, dhabarka dambe iyo lafaha la xoojiyay
Albaabka ayaa ku habboon iyada oo aan la xirin albaabka.
Cidhifka caaryada duritaanka ayaa hagaagsan oo qurux badan.
Habka wax taaj oo kale duray waa hal-xabbo wax taaj oo kale, ma processing dheeraad ah, daahirnimo sare ee alaabta ceeriin, caag sare, iyo shaqo iyo tayo fiican.
Qiimo jaban, laguma guuleysan karo ilbiriqsiyo
Tayada qalabka oo liidata
Caaryada maqaarka laguma gooyo gacanta.